The Ab Presents Nepal » कुलमान भाषण गरेर सबैको प्रिय भएका हैनन्, घामपानी, भोकनिद्रा नभनी खट्ने राष्ट्र सेवक हुन | समर्थन गर्नेले सेयर गरौं!
कुलमान भाषण गरेर सबैको प्रिय भएका हैनन्, घामपानी, भोकनिद्रा नभनी खट्ने राष्ट्र सेवक हुन|
राजधानीलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएर चर्चामा आएका पात्र हुन् कुलमान घिसिङ । आम सर्वसाधरण यतिबेला कुलमान घिसिङप्रति कृतज्ञ छन् । उनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा गत भदौ अन्तिममा नियुक्त भएका थिए । प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेको दुई महिनामै उनले जादुमय तरिकाले राजधानीलाई लोडसेडिङमुक्त बनाइदिएका छन् । लोडसेडिङ अन्त्यको नारा लगाएर विगतमा राजनीतिक दलका धेरै नेताले चुनाव जिते, कति सरकार बने, कति मन्त्रि बने । तर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने नारा नारामै सीमित भएको थियो । तर विद्युत प्राधिरकणको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै चोरी र चुहावट रोकेरै उनले राजधानीलाई झलमल्ल पारिदिएका छन् ।
यसरी जादुमय काम गर्ने कुलमान आखिर को हुन त ?
कुलमान घिसिङ रामेछापको एउटा दुर्गम गाउँ बेथानमा जन्मिएका हुन् । उनको प्राथमिक शिक्षा गाउँमै वित्यो । विकट गाउँमा जन्मिएकाले टुकी बालेर पढ्दा निधारमा झरेको उनको कपाल धेरै पटक जल्यो । नाकमा धेरैपटक कालो ध्वाँसो बस्यो । ५ कक्षा पास गरेपछि उनी दाइहरुसँग काठमाडौं आए
जब कुलमान काठमाडौँ आए त्यसपछिमात्रै उनले यहाँ विजुली देखेका हुन् ।मैले काठमाडौं आएपछि नै हो, बिजुली देखेको ।उनी भन्छन्,गाउँमा मट्टितेलवाला टुकी बालेर पढिन्थ्यो । कतिले काहीँ निधारसम्म झरेको कपाल जल्थ्यो कहिले नाकभरि ध्वाँसो बस्थ्यो|
काठमाडौँ आएपछि उनले बालसेवा माध्यमिक विद्यालयमा र पछि अमरआस बोर्डिङ स्कुलमा पढे । अस्कल क्यापसबाट आईएस्सी गरेपछि उनी छात्रवृत्तिमा भारतमा जम्सेदपुरबाट सन् १९९४ मा इलेक्ट्रीकल इन्जिनियरिङ् गरे । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट पावर सिस्टम इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गर्दा ‘इन्टिग्रेटेड रिसोर्स प्लानिङ विथ डिमाण्ड साइड म्यानेजमेन्ट’मा थेसिस गरेका उनले पोखरा विश्वविद्यालयबाट इएमबीए पनि गरेका छन् । यसर्थ कुलमान एउटा इन्जिनियरमात्रै होइनन् उनी एक कुशल व्यवस्थापक पनि हुन् । उनको पढाइ र कामको तादाम्यताले पनि अहिले मुर्त रुप पाएको छ ।
सुन्नलाई कुलमान घिसिङ नसुनेको नाम होइन । उनी यसअघि पनि विवादमा आइसकेका व्यक्ति हुन् । तर यसअघि उनी राजनीतिक खिचातानीको सिकार भएका थिए ।
कसरी राजनीतिक ढाल बने ?
सन् १९९४ मा इन्जिनियरिङ् सकेपछि करिव ०५१ तिर उनी स्वदेश फर्केर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सातौं तहको इन्जिनियर भए । प्राधिकरणमा काम गर्दागर्दै कुलमानले रसुवाको चिलिमे विद्युत परियोजनाको जिम्मेवारी पाए । चिलिमे हाइड्रो पावरको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा चिलिमेकै आम्दानीबाट तीन वटा अन्य आयोजनाहरूको निर्माण सुरु गरेका उनी पछि सो योजनाबाट हटाइए । त्यतिबेला उनी तत्कालीन उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको दबाबमा जिम्मेवारीबाट हटाइएका थिए । आयोजनाबाट हटाइएर प्राधिकरणको केन्द्रमा आएपछि उनले करिब दुई वर्षसम्म कुनै जिम्मेवारी पाएनन् ।
प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक
११ औँ तहका कर्मचारी रहेका घिसिङ गत भदौ २९ गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भए । प्राधिकरणको निर्देशकमा नियुक्त भएपछि उनी जादुमय तरिकाले राजधानीलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएर चर्चामा छन् । यसबाट उनले मुलुकमा तत्काल लोडसेडिङ अन्त्यको सम्भावनामात्रै पुष्टि गरेनन्, यहाँ बर्षौदेखि सर्वसाधरणलाई मारमा पारेर सीमित व्यक्तिले विजुलीको व्यापार गरिरहेको कुराको समेत सांकेतिक पर्दाफास गरेका छन् । साँच्चै देश र यहाँका नागरिकप्रति समर्पित भएर काम गर्ने हो भने धेरै कुराको सम्भाव्यता रहन्छ भन्ने कुराको उदाहरण कुलमानले देखाएका छन् ।
समसामयिक बिषयमा कलम चलाउने र निडर भएर अभिव्यक्ति दिने लोकान्तरका नियमित स्तम्भकार दिल निशानी मगरले कुलमान घिसिङ भाषण गरेर सबैको प्रिय मान्छे नभएको बताएका हुन् ।
कुलमानले दिनरात, घामपानी, भोकनिद्रा, चाडपर्व केही नभनी खटेर काम गरेर प्राक्टिकल्ली नेपालीलाई लोडसेडिङमुक्त गरेकाले उनि लोकप्रिय भएको बताएका हुन् । ‬
मगरले पछिल्लो समय कुलमानमाथि लगाइएको मिथ्या आरोपको खण्डन गर्दै अँध्यारो युगलाई उज्यालो युगमा बदल्ने एउटा आशाको दियोलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरेर निभाउने जुन प्रयत्न भैरहेको छ, त्यसको हामी सबैले डटेर बिरोध गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‬
उनि अगाडी भन्छन्, सार्वजनिक लेखा समितिमा चर्को भाषण गर्द नेकपा सांसद अमनलाल मोदीले कुलमान घिसिङलाई भ्रष्टचार गरेको कथित आरोप लगाएका छन् । के मोदी अख्तियार हुन्? के मोदी अदालत हुन्? लेखा समितीमा बिजुली माफियाहरुको एजेन्टको रुपमा प्रस्तुत भएका मोदी नै भ्रष्टचारी हुन् भन्ने तथ्य उनको अराजनितीक शैलीबाट नै स्पष्ट हुन्छ ।
उनले फेरी थपे,केही समय अगाडी मोदीले मागेको पाँच लाख रुपैयाँ घुस नदिएका कारण कुलमान घिसिङको बिरोध गरेका हुन् भन्ने कुरा बहिर आईसकेको छ । जनताको भावना,रगत,पसिना संग मजाक गर्ने यस्ता पाँच लाखे भ्रष्ट सांसदलाई नेकपाले कारबाही गर्नुपर्दछ। जनताले नियालीरहेका छन् । को देशको पक्षमा छ, को देशको बिरुद्धमा छ त्यो सचेत जनतालाई कुनै माईकालालले सिकाईरहनु पर्दैन‬ ।